Ithegi: ngokweemvakalelo | Martech Zone
NgeCawa, ngoJulayi 6, 2014 NgeCawa, ngoJulayi 6, 2014 Douglas Karr
Sabelane nabanye nge-infographics kwizinto zomxholo wentsholongwane kwaye ndihlala ndithandabuza ukutyhala intsholongwane njengesicwangciso. Umxholo wentsholongwane ungazisa ulwazi ngebrand-siyayibona rhoqo iividiyo. Nangona kunjalo, andikaze ndibone mntu ubetha epakini ngalo lonke ixesha. Abanye bazama kanzima, abanye bayasilela… yindibaniselwano yetalente kunye nethamsanqa elibonisa umxholo wakho kakuhle. Oko kwathiwa, ndiyakholelwa kwiindlela ezisetyenzisiweyo xa kugxilwe